Qaraxyo Lala Beegsaday Taliye Ku Xigeenka Ciidanka Soomaaliya, Guddoomiyaha Yaaqshiid Iyo Askar Toogasho Lagu Dilay - #1Araweelo News Network
Al-shabaab oo sheegatay Dilka Askarta Suuqa Bakaaraha Iyo Qaraxa Taliye Xigeenka Ciidanka
Muqdisho(ANN)-Al-shabaab, ayaa sheegatay dil maanta ka dhacay suuqa ganacsiga ugu weyn magaalada Muqdisho ee Bakaaraha.
Sidoo kale, waxa maanta qarax lala beegsaday Taliye ku xigeenka Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha degmada Yaaqshiid.
Marxuum Cali Axmed Xasan iyo Marxuum Ismaaciil Axmed Siyaad, oo lagu dilay Suuqa Bakaarah waxa la sheegay inay ka tirsanaayeen Ciidamada Nabadsugida Soomaaliya, gaar ahaan qeybta lagu magcaabo ilaalada Shacabka ee dharcada ah.
Labada nin ayaa xilliga la dilay ku sugnaa suuqaa, iyagoo wata Mooto, waxaana weerarkaas sida la sheegay lagu dhaawacay Nin kale oo la socday.
Dablayda fuliyay dilka, ayaa goobta ka baxsaday, iyadoo ay markaa kaddib halkaa gaadheen askar Boolis ah oo aan ka fogayn goobta dilku ka dhacay.
Al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyada dilkaa,waxayna raggaa ku tilmaameen in ay ahaayeen qaar ka tirsanaa ciidanka dawladda, sida ay ku shaaciyeen qoraal lagu daabacay warbaahinta dhanka Internet-ka ee yaallaa lagu baahiyo wararka kooxdaa..
Dilka lagu khaarajiyay labadaa Nin, ayaa kusoo beegmay xilli Maanta Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo lala beegsaday Taliye ku xigeenka Ciidanka xoogga dalka iyo Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid.
Waxayna falalkan qayb ka yihiin amniga magaalada muqdisho ee sii xumanaaya, iyadoo aan weli meel laysla dhigin khilaafkii ka taagnaa doorashada Soomaaliya.
Dhinaca kale, hay’addaha amaanka ee dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaan wax faah fahin ah ka bixin dilka labada askari iyo qaraxa lala beegsaday Taliye ku xigeenka Ciidanka xoogga dalkaJ eneral Cabaas Amiin Cal iyo Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid.
Al-shabaab, waxay sheegtay in miino loo dhigay wadada isku xidha Tiyaatarka iyo isgoyska KM4 ee degmada Hodon subaxnimadii hore ee saaka, balse waxay sheegeen in ugu yaraan laba askari ku dihnteen qaraxaa, saddex kalena ku dhaawacmeen.
Sidoo kale, Al-shabaab waxay sheegtay gaadiidka ay wateen Taliyaha iyo ciidankiisu khasaare soo gaadhay. sida lagu baahiyay warbaahinta yaallaa daabacda wararka Al-shabaab.